VSCodium, i100% yakavhurika sosi forogo yeVisual Studio Code | Kubva kuLinux
VSCodium, 100% yakavhurika sosi yeforogo yeVisual Studio Code
Microsoft iri kuvandudza Visual Studio Code seyakavhurwa sosi purojekiti, inowanikwa pasi peMIT rezinesi, asi kusangana kwemabhinari zvakapihwa zviri pamutemo iwo haana kufanana nekodhi kodhikubvira inosanganisira zvikamu zvekutevera zviito zvemuparidzi uye kutumira telemetry.
Iyo telemetry muunganidzwa inokonzerwa nekugadzirisa kweiyo interface ichifunga nezve chaiyo maitiro evagadziri.
Uyewo, kuunganidzwa kwemabhinari kunogoverwa pasi pechimwe chakasiyana-chisina rezinesi
Visual Studio yakagadzirirwa kushandisa iyo Atom chirongwa uye iyo Electron chikuva, Yakavakirwa paChromium uye Node.js codebase.
Mhariri inopa yakavakirwa-mukati debugger, zvishandiso zvekushanda neGit, kugadzirisa maturusi, kodhi yekufambisa, kugadziridza otomatiki kwezvakajairwa kuvaka uye nerubatsiro rwemamiriro.
Zvinopfuura zana mitauro yekuronga uye matekinoroji anotsigirwa. Kuti uwedzere mashandiro eVisual Studio Code, unogona kuisa mawedzera-ins.
Tatarisana nedambudziko remupepeti uyu, imwe yemahara nzira yakasununguka yakabvisa zvinokambaira zveVisual Studio, imwe nzira yatichataura nezvayo nhasi iVSCodium.
1 VSCodium yemahara imwe nzira kune Visual Studio Code
2 Maitiro ekuisa VSCodium paLinux?
VSCodium yemahara imwe nzira kune Visual Studio Code
VSCodium yakavhurika sosi, yemahara kugadzirwa kweVisual Studio Code (kubva kuMicrosoft) yakagadzirwa saka vagadziri havafanirwe kubata ne telemetry/ vanokambaira vane Visual Studio Code ana.
Sechikamu cheiyo VSCodium chirongwa, irikugadzirwa seForogo yeVisual Studio kodhi mupepeti. VSCodium iyo yakanakisa sarudzoSezvo ichingori nezvinhu zvemahara, inozvichenesa kubva pazvinhu zvine zita reMicrosoft.
Kugadziridza uku kunowanikwa nekushandisa akakosha magwaro kuonesa Visual Studio Code kubva panzvimbo, kuisanganisa kubva kwayakabva, wozoisa mabhaari anokonzeresa kuGitHub vhezheni yeVSCodium isina telemetry kupfuura.
Izvozvo zvakati, VSCodium inonyanya mufananidzo weVisual Studio Code uye saka inoshanda nenzira imwecheteyo neese maficha uye rutsigiro ruripo mune yako huru chirongwa. Kunze kweiyo icon yeapp, izvo zvakasiyana.
Zvekushanda, VSCodium inodzokorora Visual Studio kodhi uye inopa plug-level kuenderana (kuburikidza nemapulagi, semuenzaniso, tsigiro yeC ++, C #, Java, Python, PHP, uye Go inowanikwa)
Maitiro ekuisa VSCodium paLinux?
Dai iwe uine Visual Studio Code yakaiswa uye iwe uchida kuchinjira kune iyi 100% yakavhurwa sosi imwe nzira kana iwe unongoda kuyedza iyi edhita.
Unogona kuiisa pane yako system nekutevera rairo dzatinogovana newe pazasi.
Vaya vaverengi vari vashandisi veDebian, Ubuntu kana chero kumwe kugovera kunobva kana kunobva pane izvi.
Vari kuenda kuvhura terminal pane yako system uye mairi vanozoita unotevera kuraira nawo iyo GPG kiyi yeapplication repository ichawedzerwa:
Kana izvi zvangoitwa, isu tinogona ikozvino kuenderera kuwedzera iyo VSCodium repository kune yako system.
sudo echo 'deb https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/repos/debs/ vscodium main' | sudo tee --append /etc/apt/sources.list.d/vscodium.list
Kamwe iyo yekuchengetera uye iyo GPG kiyi zvabudirira kuwedzerwa kune yako system, ikozvino iwe unofanirwa kuita inotevera mirairo yekuvandudza yako package package uye iyo nyowani reposvo yaonekwa:
Pakupedzisira iwe unogona kuisa mupepeti pane yako system nekuita unotevera kuraira mune iyo terminal:
Zvino mune izvo zvevaya vari vashandisi veFedora, Centos, RHEL kana chero chimwe chinobva pane izvi, vanogona kuisa VSCodium vachishandisa inotevera mirairo.
Kutanga ivo vanovhura terminal pane yavo system uye ivo vanofanirwa kunyora iwo unotevera kuraira mune iyo terminal:
sudo dnf config-manager --add-repo https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/repos/rpms/
E isa mupepeti pane yako system nemirairo inotevera:
sudo dnf instala vscodium
Zvino nezvenyaya yeavo vari vashandisi ve chero vhezheni yeOverSUSE nyora zvinotevera:
sudo zypper addrepo -t YUM https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/repos/rpms/ vscodium_mirror_on_gitlab
Uye ivo vanoisa ne:
sudo zypper en vscodium
Pakupedzisira, kune chero ani vashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero chimwe chinobva paArch Linux, vachakwanisa kuisa mupepeti kubva kuAUR.
Mune mhando yekupedzisira iwo unotevera kuraira:
yay -Sy vscodium
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » VSCodium, 100% yakavhurika sosi yeforogo yeVisual Studio Code
Ndakaedza kuisa vscodium muUbuntu Mate uye nhanho dzese dzakabudirira asi pakupedzisira mukumisikidza zvinondipa kukanganisa E: Iyo vscodium package haina kugona kuwanikwa.
sudo apt kugadzirisa && sudo apt kuisa codium
Pindura kuna norberto
Carlos Fonseca akadaro
Uye iripi kodhi yekodhi yekunyora kubva pairi?
Cristian Calderon akadaro
wget -qO - https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/master/pub.gpg | Sudo apt-kiyi inowedzera -
sudo inofanirwa kuve diki kungangoitika vana
Pindura kuna Cristian Calderon
Iyo NetBSD timu iri kugadzira nyowani yeNVMM hypervisor
Iyo nyowani vhezheni yeKotlin 1.3.30 mitauro yemutauro inosvika